Automatic Capsule Metage edida Machine (CMC)
Na mmepụta nke capsules, fluctuations nke Capsule igwe na-emekarị-eme n'okpuru ịhụnanya nke mmadụ, igwe, ihe onwunwe, ụzọ na gburugburu ebe obibi. Ụfọdụ capsules bụ nke iche na-ekwupụta a elu n'ihe ize ndụ na àgwà nke a ga-hụrụ dị ka "ize ndụ ngwaahịa". Olee otú obibi ọtụtụ ize ndụ ngwaahịa bụ mgbe a isi ọwụwa maka àgwà akara ngalaba na mmepụta ngalaba.
CMC (Automatic Capsule Metage edida Machine) jikoro capsules otu otu, edida ha n'ime ezi na jụrụ dị ka gaghị agara ibu nso. Ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru okè na elu arụmọrụ, na-ebelata-akwụ ụgwọ ma na-enyere aka mma Capsule àgwà.
Ka ọ dịgodị, na-arụ ọrụ arụmọrụ nke CMC usoro nwere ike mụbara infinitely na ya kee ihe na-arụ ọrụ mode - "extendable unit Ọdịdị" na "na-akparaghị ókè ukem njikọ". Ya mere, ọ nwere ike ike ọ bụla Capsule ndochi igwe itu ọ bụla Capsule si mmepụta.
Na ọdabara Capsule Size
Osote: Capsule Checkweigher CMC-800
Ezi Capsule Ịtụle
Automatic Capsule edida Machine
Capsule Nnyocha Device
Capsule Nnyocha Machine
Capsule Ịtụle Machine
Capsule arọ Checker
Capsule arọ atule Machine
Capsule arọ Control
Capsule arọ Nnyocha
High nkenke Capsule Checkweigher
Industry-eduga Capsule Checkweigher